काठमाडौं- बैतडीको दशरथचन्द्र नगरपालिका वडा नम्बर १ मा सडक निर्माणका क्रममा भएको विवादमा महिलालाई डोजर ९स्काभेटर०को बकेटले प्रहार गरेर लडाउने अपरेटरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
समाजिक सञ्जालमा भिडियो देखेपछि अपरेटर किशोर बोहरालाई पक्राउ गरी प्रहरीको हिरासतमा राखिएको जिप्रका बैतडीका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक डिल्लीनारायण पाण्डेयले नेपाल समयलाई फोनमा बताए। उनले भने, ‘भिडियो देखेपछि अपरेटरलाई पक्राउ गरेका छौं। तर, पीडित पक्ष सम्पर्कमा नआएकाले अब गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन।’
उनले सो घटनामा घाइते भएको र आफ्नो डोजरमा क्षति पुगेको भनेर सडक निर्माण पक्षका मानिसहरु भने सम्पर्कमा आएको बताए। उनले दुबै पक्षका ७ जनाले जिप्रकामा घाउ जाँच केस फार्म गरेको बताए।
नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको सडकमा विवाद भएकाले यो विषयमा नगरपालिकाका मेयरसँग पनि छलफल गरिने बताए। उनले मेयर नरेन्द्रजंग थापासँग मंगलबार नै छलफल गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
ग्वाल्लेकमा सडक निर्माणका बिषयमा आइतबार विवाद हुँदा डोजर अपरेटरले एक महिललाई डोजरको बकेटले प्रहार गरेर लडाएको भिडियो भाइरल भएको थियो। डोजरले स्थानीय गौरी जोशीलाई लडाएको थियो। उनी उपचारका लागि कैलालीको धनगढी पुगेको प्रहरी नायव उपरीक्षक पाण्डेयले जानकारी दिए।
सो भएको झडपमा परी ७ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुण्नाखानदेखि पार्ससम्मको सडक निर्माणका बिषयमा विवाद भएको थियो।
स्थानीय गौरा जोशीलाई डोजरबाटै आक्रमण भएपछि विवादले झडपको रुप लिएको हो। सडक लैजान नदिने पक्षका गौरा जोशी र सुरेशप्रसाद जोशी घाइते भएका छन् भने सडक निर्माण हुनुपर्ने पक्षका नारायण जोशी, सन्तोष जोशी, पुष्कर जोशी, दिनेश जोशी, भोजराज जोशी र धर्मानन्द जोशी घाइते भएका छन्।
स्थानीयले मुआब्जा बिना आफ्नो जमिनमा डोजर चलाएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। यता सडक निर्माण समितिका अध्यक्ष केशवदत्त जोशीले सडक निर्माण गरिरहेको अवस्थामा एक्कासी डोजरमा ढुंगामुढा गर्दा झडप भएको बताए।
सामाजिक सञ्जालमा डोजरले महिलामाथि प्रहार गरेको भिडियो भाइरल बनेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले अपराधको पराकाष्ठा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यस्तो हेर्नैनसकिने दृश्य ! मान्छेलाई डोजरले हाक्काहाक्की पेल्ने त अपराधिक मानसिकताको पराकाष्ठै भयो ! दूर्गम भेगका जनता र झन् महिलालाई मान्छै नगन्ने कस्तो प्रवृत्तिरु यस्तो प्रवृत्ति सहन गर्नु पनि अपराध हैन र ? कहाँ छ सरकार र ? तुरून्त अपराधीलाई कठघरामा उभ्याइयोस् ! निमुखा जनताको सुरक्षा होस् !’